Izitya ezi-4 zokunika itafile yakho umbala wombala | IBezzia
UMaria vazquez | 20/07/2021 12:00 | Ukupheka
Ngexesha lasehlotyeni sonke sinobuganga ngombala emakhayeni ethu. Sibhenela ku izixhobo ezinemibala eqaqambileyo ukwenza iimeko ezichwayitileyo ezihambelana nendlela esivakalelwa ngayo ngeli xesha lonyaka. Kwakhona etafileni, apho izitya ezimibalabala zithatha indawo ephambili.
E-Bezzia sabelana namhlanje ngeetafile ezine onokuthi uzenze nika itafile yakho umbala wombala. Kwaye, akuyi kufuneka uthenge i-tableware epheleleyo ukuyenza, kuyakwanela ukufaka iziqwenga ezimbalwa ukuze itafile yakho yamkele imowudi yehlobo.
Siyazi ukuba i-tableware epheleleyo ibonisa utyalo-mali olukhulu. Ukongeza, ayizizo zonke izindlu ezinendawo yokuhlala izitya ezimbini ezigqibeleleyo. Ke ngoko, siyakukhuthaza ukuba uthenge iziqwenga ezizodwa, iziqwenga ozithandayo, ezitsala umdla wakho kwaye onokuthi uzidibanise netafile yakho yemihla ngemihla.
1 Itafile yeglasi yetafile yeZara
2 Itafile yeValence
3 Itafile kaOdalin
4 Itafile yeBaita kunye neiglasi zeGeometri
Itafile yeglasi yetafile yeZara
Itafile yeglasi enemibala emthubi, eluhlaza eluhlaza nepinki evela kwingqokelela entsha yeZara Ekhaya ayihambi. Kwaye ukuba iziqwenga zawo ngokwahlukeneyo ziyatsala, linda ude uzibone kunye! Xa iziqwenga zemibala eyahlukeneyo zidityaniswa kwitafile, njengakwikhathalogu yazo, itafile iyaguqulwa.
Olukhetho esithandileyo kodwa olunentle kodwa: i-tableware ayilungelanga i-microwave okanye i-dishwasher. Ngesi sizathu, asithathi njengendawo yokutya etafileni etofotofo yemihla ngemihla, kodwa iipleyiti zayo zeedessert okanye iiglasi zinokuba lukhetho olukhulu lokugqiba ukutya okanye ukonwabele ukutya okulula.
Ukuba uyayithanda imibala yetafile yasekhaya yaseZara, awuyi kuba nakho ukumelana nobomvu, imifuno kunye notyheli kwitheyibhile yeValance. Iyathengiswa eMaisons du Monde le ntsimbi yamatye kunye neetafile zodongwe, ngokungafaniyo naleyo yangaphambili I-microwave kunye ne-dishwasher iyahambelana.
Itafile yokutya iqulethe iipleyiti zesidlo sangokuhlwa, iipleyiti zesuphu, iipleyiti zedessert, iikomityi, izitya kunye neetreyi zokutya. Uninzi lweendawo zithengiswa ngamanani amabini, ke ngekhe ubenangxaki ekwenzeni ukwakheka kokuthanda kwakho ngaphandle kotyalo-mali olukhulu.
I-Odalin evela kwiKhaya laseKave yeyona nto iphambili kuzo zonke iitafile ekubonisa thina namhlanje. Yenziwe nge-porcelain, iqhekeza ngalinye elenza le tableware linemibala emhlophe yoyilo enemibala emibini umahluko okombala otyheli okanye oluhlaza okwesibhakabhaka. Ewe ungayikhetha kwiithoni eziluhlaza ngakumbi.
Yenziwe nge-porcelain, isimbiwa sendalo, isiqwenga ngasinye sineethoni kunye noburhabaxa. Zonke zinjalo Umatshini wokuhlamba izitya okhuselekileyo, Imicrowave kunye ne-oveni kwaye ungazisebenzisa ukunxiba itafile yakho ngaphakathi nangaphandle, kwithambeka lakho okanye egadini.
I-Odalin yingqokelela elungiselelwe ukutya kwazo zonke iintlobo. Yenziwe ngamacwecwe acabaleleyo, iipleyiti zedizethi, izitya ezinobungakanani obahlukeneyo kunye neseti yekofu, ezinamaqhekeza onokuzithenga ngokwahlukeneyo, ungazalisa itafile yakho ngesitayile ukusuka kwisibheno ukuya kwi dessert.
Itafile yeBaita kunye neiglasi zeGeometri
Itafile yeBaita tableware eyi-18 evela eVilla D'Este Ekhaya iTivoli yenye yezinto esizithandayo ngenxa yemibala yayo emihle nentsha. Yenziwe ngamatye amatye kwaye ipeyintwe ngesandla Inama-6 epleyiti yesidlo sangokuhlwa, iipleyiti zesuphu ezi-6 kunye neepleyiti ezi-6 zedessert ngemibala emi-6 ngokwahlukeneyo. Ukuphambuka ekubunjweni nakwimbala kukwagxininisa umtsalane kwisiqwenga ngasinye, awuvumi?
Nangona siyithanda kakhulu, izitya zinee-buts ezimbini. Eyokuqala kukuba awukwazi ukuthenga iziqwenga ngokwahlukeneyo; izitya zithengiswa ziphelele eWestwing. Okwesibini kukuba hayi umatshini wokuhlamba izitya okhuselekileyo, ezinokuthi zingabi nakusetyenziswa imihla ngemihla.
Ukubuyekeza, nangona kunjalo, nakwi-Westwing ungayifumana iiglasi neebhekile ehamba nale tableware kwimifanekiso. Zombini iiglasi kunye neglasi enepateni ebunjiweyo enemibala eyahlukeneyo kunye noyilo zilungele ukongeza umbala kwitafile yakho kwaye nesicoci-mpahla sikhuselekile!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Ukupheka » 4 itafile yokunika itafile yakho umbala wombala